I-TT IGCISA LIFUNA IKLABHU YASEBALTIMORE UKUBA ILIFUMANE - INQANABA
I-TT Igcisa lifuna iklabhu yaseBaltimore ukuba ilifumane
Uyawazi umculo weklabhu yaseBaltimore xa usiva. Ngokudityaniswa kweebhloko ezintathu ezingapheziyo, iisampulu ezinesitayile, ii-chops zezwi, kunye nefuthe le-bombastic, ezi ngoma zakhiwa ukuze zithathe ingqalelo yabona bantu baninzi. Izitayile zomculo ezihamba kunye nomdaniso nazo ziyabonakala: Konke kusemilenzeni-ukuphosa amadolo kunye nokuvumela amandla akho ukuba akuqhubele emgangathweni. Ngaphezulu kwayo nantoni na, iklabhu yaseBaltimore kukukhutshwa ngovuyo. Kodwa ayisiyiyo into yokuqala abantu abaninzi abayithathela ingqalelo xa becinga ngesixeko, esisoloko sixakwe yingqondo yendlala kunye nokungahoywa.
TT uMzobi ujonge ukutshintsha loo nto. Umvelisi, uDJ, kunye umnikazi welebula 'S isikhombisi sokuqala IsiXeko esiMnyama phantsi kweBeat , ngoku ukusasaza kwiNetflix, kukhanyisa ukukhanya kubavelisi kunye nabadanisi abenza ukuba indawo yeklabhu yesixeko ihambe. Yinxalenye yamaxwebhu, yinxalenye yealbham ebonakalayo- ikholaji yeetekhnoloji ehambelana nekhefu lokudlidliza eluntwini. Ifilimu, ebalwayo Ukungaqiniseki U-Issa Rae phakathi kwabavelisi bayo, akaphindi afunde imbali, kwaye akaphindi angene ekukhetheni ngokubambisana kweklabhu yaseBaltimore ngamagcisa aphambili afana neDiplo. Endaweni yoko, ijolise kwindlela umculo, kunye nenkcubeko ejikelezileyo, ebashukumisa ngayo abantu abazinikeleyo kuyo-zombini ngokoqobo nangokweemvakalelo.
Ndabona ukuba asiyifuni enye ifilimu ebonisa nje abadanisi ezitalatweni, okanye abesilisa abantsundu abantsundu beleqwa ngamapolisa, okanye ukudubula kwezakhiwo ezishiyiweyo, utshilo uTT. Kulapho ndaye ndagqiba kwelokuba le izakuba ngu umculo Uxwebhu; hayi nje iintloko zokuthetha kunye ne-B-roll footage, kodwa amava aya kunceda abantu bazive ukuba aba badanisi baziva njani xa kufikwa kulo mculo.
Umthonyama waseMiami owafudukela eBaltimore ukuya kwiKholeji yase-Maryland ye-Art njengomntwana okwishumi elivisayo phakathi kwiminyaka yoo-2000, i-TT yaqala ukuboniswa kwindawo yesehlo ngelixa yayisebenza okwethutyana njengomdanisi ohamba-hamba kwii-nightclub zedolophu. Nangona kunjalo, wayesazi ukuba ufuna ukuthabatha imvakalelo yoluntu edibeneyo kwi-club yaseBaltimore. Yayiluhlaza nje kwaye inamandla kum, kwaye yandenza ndanxibelelana ngakumbi nesixeko, naye, utshilo. Bendifana: Umntu othile kufuneka abhale phantsi oku .
Ukubonakaliswa kweNetflix kuthetha Isixeko esimnyama yenye yezona zinto zibalaseleyo ekubonakalisweni kwalo mculo womdaniso wengingqi ukuya kuthi ga ngoku, kunye nethuba lokubalisa ibali ngobuhle kunye nentlungu ejikeleze intshukumo eyodwa yeBaltimorean. I-TT ithethe nathi malunga nendlela ende yokwenza ifilimu, inika abasetyhini oovulindlela ilungelo labo kuluhlu lweencwadi, nangaphezulu.
Pitchfork: Uqale njani malunga nokwenza Isixeko esimnyama ?
TT uMzobi: Inzame yokuqala yokuyidubula ngokusemthethweni yayiku-2011, kwaye ekuqaleni yayiza kuba li-doc elifutshane ngokwesiko, njengemizuzu eli-15 ubude. Kodwa yonke into engahambanga kakuhle yahamba gwenxa: Ndine gear ebibiwe, kwaye kwaqhutywa iidrive hard, kwaye ndalahleka iipesenti ezingama-70 zemifanekiso yoqobo ebendiyifumene. I was super frustrated, ngathi, andazi ukuba ndizakuyenza njani le nto.
Ndafikelela kubantu abaninzi ngelo xesha, kwaye elinye iqela elalihlala liqonda kwaye landamkela yayingumdaniso waseBaltimore. Umzuzu ndaya kweyokuqala UKhuphiswano lomdaniso kaKumkani waseBaltimore , yalawula inkuthazo yam yokufuna ukwenza ifilimu.
Uxwebhu lokubhiyozela iklabhu yaseBaltimore kunye nenkcubeko yomdaniso kodwa ikwaqonda uninzi lweentlungu abantu esixekweni abaye bajongana nazo ngokwembali. Ufike njani kuloo nto?
Ndifuna ukubonisa ubugcisa, kodwa kwakhona ndicofe imeko yezoluntu yesixeko. Uxinzelelo oluninzi lunento yokwenza nezithuba kunye nokufikelela kwamagcisa ukuba abe kwezo ndawo. Ngokomzekelo, kukho indawo kunye nabadansi-ndibiza ngokuba yi-Resist scene. Banxibe wonke umbala obomvu e-Inner Harbour, apho abadanisi babedla ngokudibana khona, kodwa amapolisa ayebakhaba. Kuya kuba njengabantwana abancinci, nabo. Babefuna nje ukudanisa. Kufana, Esi sisixeko sethu, nathi. Ke loo ndawo yaba ngumzuzu wokufumana kwakhona indawo-isiqhu esikhulu sobugcisa bokusebenza.
Igama elinye ekubhekiswe kulo amatyeli aliqela ngu U-DJ K-Swift , ngubani trailblazer kule ntshukumo wasweleka ngo2008. Wayethetha ukuthini kuwe?
Xa ndingena kwindawo, uK-Swift wayebuso beklabhu yaseBaltimore. Nge-DJing yakhe kwi-92 Q FM, wenza indlela yokuba abavelisi abazimeleyo abaphuma eBaltimore bazokufumana umculo wabo kunomathotholo, kwaye wabanika ukubonakaliswa kwiiklabhu xa esenza iirekhodi zakhe. Waqala iklabhu yokumkanikazi wave; Wayeyikumkanikazi yokuqala yeklabhu. Ukuqala kwam irekhodi yokurekhoda, ndandifuna ukuyibiza ngokuba yiClub Queen Records. Ndayibiza ngegama lakhe, nasemva kwento ayiqalileyo, kuba ndiyayithanda into eyimeleyo. Yintshukumo ayiqalileyo, kwaye ndiyakucaphukela ukufa ngaphandle kokufumana ixesha elifanelekileyo.
U-K-Swift wayesenza lo msebenzi-kodwa ndiziva ukuba, xa kufikwa ekubeni ngumfazi, asisoloko sifumana ukwamkelwa kwendima esiyidlalayo kwimibutho ekhokelayo. Abantu ababaniki abasetyhini amalungelo abo. Ke sithethe kakhulu nge-K-Swift kuba isizukulwana esibonakalisiweyo kule filimu sikhule ngexesha lakhe.
Unokuyiva impembelelo yeBaltimore kumculo ophambili ngoku. Ngaba unayo ingqiqo yokuba kukho enye imvuselelo yeklabhu yaseBaltimore ekugqibeleni?
Ewe. Kodwa ndicinga ukuba sele iqhubeke ishumi leminyaka, kuba bendikhokela. Ndiqale ukwenza umculo weklabhu nge UMarko onaMandla kwi-2009, kwaye xa iibhlog zaziza eBaltimore, babebiza mna noMarko oMandla, kwaye sibeka abantu abaninzi endaweni. Abantu abazi ukuba ndadlala indima enkulu ekuvuseleleni umculo weklabhu yaseBaltimore, kuba xa uK-Swift wayedlula, indawo yonke yahamba phantsi komhlaba. Wonke umntu wayesezipokothweni zakhe.
Namhlanje, unabaculi abaqhelekileyo abanjengoCiara benza umculo weqela kunye nabavelisi abavela eBaltimore endithetha nabo yonke imihla. Xa ndabona uCiara eqhuba irekhodi lakhe leklabhu kuNyaka oMtsha, ndazibona ndikwelo qonga. Kodwa iBaltimore ayisiyonto yomculo-awunazo iilebheli ezibona abo baculi, okanye umntu oza kukukhupha apho kwaye adibanise nabantu abafanelekileyo. Kuyamangalisa ukubona ukuhamba kwesandi, kodwa kuya kuba kuhle ukuba amagcisa amaninzi afikelele ekufumaneni amanqaku kubaculi abavela kwingingqi.
Ndizama ukubonisa abantu ukuba kukho italente eBaltimore, kwaye umculo weqela laseBaltimore sisandi eso isuka IBaltimore. Ndiyathemba ukuba ngale nto, uninzi lwala magcisa luya kuba nakho ukufumana izixhobo zokwakha izimvo zabo zokuyila kunye nokusebenzisana nabantu kwezinye iidolophu ezinokuthi zingakhange zijonge eBaltimore njengeziko leetalente.
Ngoobani abavelisi beeklabhu zengingqi ocinga ukuba abantu kufuneka bazi ngoku?
Kunjalo, UMarko onaMandla . Kukho umvelisi omangalisayo ogama lingu HI $ UKUZE , yeyona super dope. Ufumene YG Ukubetha , Ngubani umvelisi othengisa iplatinam. Kwaye kunjalo UNIIQU3 , Ngubani umvelisi obhinqileyo ophuma eJersey.
UKariz Marcel , Ovezwe kwingoma yethu yesandi, wavelisa ingoma ethi Hey Baltimore endayibamba ngumoya kwiminyaka emibini edlulileyo kwaye ndacinga ukuba singaphefumla ubomi obutsha kuyo. Ngoku ndibona abantu eLos Angeles bedlala uHey Baltimore kwaye ndicinga kum, Oku kunokuba ngumhobe omtsha weSixeko saseBaltimore . Singacinga ukuba inkulu kangako.
Isikhumbuzo se-nipsey hussle bukhoma
Iingoma ezilungileyo ze-rap
marvin gaye apha, sithandwa sam
I-albhamu yokuvavanywa kwamatye asap
ikhava yealbhamu yeemegan me stallion
UJustin timberlake oscars 2017 ukusebenza